भ्रष्टलाई हैन, सात अर्ब मान्छेको हीतमा काम गर्नेलाई गुरु/भगवान मानौ | suryakhabar.com
Home विचार/ब्लग भ्रष्टलाई हैन, सात अर्ब मान्छेको हीतमा काम गर्नेलाई गुरु/भगवान मानौ
भ्रष्टलाई हैन, सात अर्ब मान्छेको हीतमा काम गर्नेलाई गुरु/भगवान मानौ
on: ३१ असार २०७६, मंगलवार १५:१० In: विचार/ब्लगTags: No Comments
बाबुराम आचार्य /गुरु पूर्णिमा कसैले सामाजिक सँजालबाट त कसैले आ–आफ्ना गुरुहरुलाई हार्दिकतासाथ श्रद्धासुमन अर्पण गरेका छन् । कसैले आफूलाई अध्ययन गराउने शिक्षकलाई मानेर श्रद्धासुमन हर्पण गरे त कसैले आफ्ना बुवा आमालाइ, कसैले आफूले मानिआएको पण्डीतजीलाई, त कसैले आफूलाई श्रद्धा लाग्ने कुनैपनि ब्यक्तीलाई ।
गुरु शब्द आफैंमा पवित्र शब्द छ । गुरु भनेर शिक्षकलाई भन्ने गरिन्छ भने मन्दीरमा पुजा गर्ने पुजारीलाई पनि गुरु भनेर बोलाउने गरिन्छ वा कोही व्यक्तीको नाम पनि गुरु हुन्छ । गुरु शब्द राम्रो भएर नै मानिसहरुले आफ्ना सन्तानको नाम समेत राखेका हुन् । जस्तै कृष्ण, राम, हरि, शंकर नाम आफ्ना सन्तानको राखेका हुन्छन् त्यसैगरी गुरु नाम पनि पवित्र भववानको नाम जस्तै मानेर राखेका हुन्छन् ।
कसैको नाम नै गुरु भयो भने त केही लाग्दैन गुरु वा भगवान भन्ने शब्दको हाम्रो समाजमा दुरुपयोग भयो कि भन्ने मलाई लागेको छ । बिराटनगर नजिक पर्ने भारतको सीमाना जोगवनीमा एकजना भगवान नामक ‘डन’ थिए, पछि उनी प्रहरी ईन्काउन्टरमा मारिए भन्ने मैले सुनेको, पुष्टी भने भएको छैन । उनको नाम भगवान थियो, उनी भगवान थिएनन् । उनलाई भगवान मान्नेलाई त के लाग्छ र ? उनले पनि कसैको उपकार गरेका थिएनन् भन्ने पनि त छैन नि ! सानो उपकार गर्ने, कर्तब्य गर्नेबित्तिकै गुरु वा भगवान मानिहाल्ने होईन नि ।
गुरुलाई भगवान मान्दछन् । गुरुलाई भगवान मान्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो हिन्दु संस्कारका विभिन्न गीता, पुराणहरुमा छ । गुरु भनेको पथ प्रदर्शक हो । समाजमा अगाडी बढ्न राम्रो बाटो देखाउने ब्यक्ती नै गुरु हो भन्ने चलन छ ।
‘गुरु ब्रम्हा, गुरु विष्णु, गुरु देवो, महेश्वर !
गुरु साक्षात् परम्ब्रम्हा तस्मैश्री गुरुवे नमस्!!’
माथीका दुई हरफले आज सामाजिक सञ्जाल फोसबुक, ट्वीटर लगायतका भित्ताहरु रंगिएका देखिन्छन् । तर गुरु कसलाई मान्ने ? कस्तो व्यक्तीलाई भगवान मान्ने ? विश्वभरका बहहुसंख्यक मानिसले सीधै उत्तर देलान्– शिक्षक, आमाबाुवालाई वा भगवानलाई नै गुरु मान्छौं । हिन्दू, क्रिश्चियन, मुश्लिम जुनसुकै धर्म मान्नेले पनि आफ्नो धर्मको आस्था अनुसार नै भगवान वा गुरु मान्लान् । त्यो हजारौं बर्षदेखी अथवा शत्ययुगदेखी नै चल्दै आएको चलन हो, किन आमाबुवालाई भगवान मानिन्छ ? किन शिक्षकलाई गुरु मानिन्छ ?
अस्पतालले बरु बिरामी भएपछिमात्र घरखेत बेचाउछ तर प्राईभेट स्कुल कलेजले जिउदै मरेको तुल्य बनाउछ, बिनापैसा पढ्न पाउने ठाँउमा आफ्नालईमात्र छात्रबृतिमा नाम निकाल्न तम्तयार हुन्छ । लाखौंका बिटा लिएर तपाईको ६५ नम्बर आएको छ भने ९ नम्बर आउनेको अगाडी ६ थपेर ६९ नम्बर दिएर तपाईलाई पछि पार्छ धेरैपछिकोलाई तपाईभन्दा अघि पार्छ, उदाहरण केहीदिन अगाडी त्रिभूवन विश्वविद्यालय किर्तिपुर गोप्य साखाका कर्मचारी सुरेन्द्र कोईरालालगायतको उदाहरण दिईएको हो । वीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपनि प्रा.डा. थिए उनलाई करोडौंको भ्रष्टाचार मुद्धामा अख्तियारले रङ्गेहात पक्राउ परेर थुनेको छ, कि उनैलाई गुरु मान्ने? उनले पनि हजारौं विद्यार्थीलाई पढाए ।
अन्य अर्थ नलगाउने हो भने मलाई लागेको कुरा सीधा छ आमाबुबाबाट छोराछोरीले फाईदा पाएका हुन्छन् । शिक्षकबाट विद्यार्थी वा चेलाहरुले फाईदा पाएका हुन्छन् । आमाबुबाबाट शिक्षादीक्षा लगायतका जन्मेदेखीका आफ्नो गच्छे अनुसार सबै आवश्यक्ताहरु छोराछोरीले पुरा गरेका हुन्छन् भने बाहिरी ज्ञानको बारेमा शिक्षकबाट आवश्यक्ता पुरा गरेका हुन्छन् । त्यही कारणले शिक्षकलाई पनि मानिसहरुले गुरु वा भगवान मानेका हुन्छन् ।
आमाबाबुको छोराछेरीको खास सम्बन्ध
माआबाबुले छोराछोरीलाई हुर्काउनु, पालनपोषण गर्नु, शिक्षित बनाउनु, स्वस्थ्य बनाउन एक उनीहरुको कर्तव्य मात्र हो तर प्रायः आमाबाबुले हेरेका छोराछोरीबाट ठूलो हुन्जेल गरेको गुणको ब्याजसहितको फाईदा अशुल्न खोज्नु पाप हो । छोराछोरीले आमाबाबुलाई जन्माउनु भनेर जन्माएका हुन्नन्, जन्माएका हुन्छन् त पछि बुढाबुढी भएपछि हेर्छ भन्ने उद्देश्यले । त कुनै कुनै आमाबाबुले प्रकृति वा मानव सभ्यताको विकास क्रमलाई बचाउन समेत छोराछोरी जन्माएका हुन्छन्, उनीहरुले सन्तान जन्माउछन्, हुर्काउछन्, राम्रो शिक्षादीक्षा दिन्छन् तर उनीहरुलाई छोराछोरीले हेरेनन् भनेपनि कुनै पश्चाताप हुँदैन । कसैले बाध्यतामा परेर (उमेरको सदुपयोग गर्न नजानेर वा पारिवारिक बाध्यता) समेत सन्तान जन्माएका हुन्छन्, बाध्यतामा जन्माएपनि उनीहरुलाई हुर्काउन पढाउन पनि सक्छन्, बालआश्रममा लगेर छाडिदिन पनि सक्छन् त्यो फरक कुरा हो । अर्कोतर्फ छोराछोरी पनि प्रायः यस्ता हुन्छन् कि सानो हुंदा आमाबुबाले कत्तिको माया गरे गरेनन्, शिक्षादीक्षा राम्रो दिन सके वा सकेनन् त्यही अनुसार बाबुआमालाई गुरु वा भगवान मान्ने । गुरु भनेर अर्को श्राद्ध गर्न, पण्डीत्याई गर्न, पुजा लगाउन, पुराण भन्न जानेलाई पनि भन्ने चलन छ, वा मान्ने चलन छ ।
यसमा कुरा गर्दै जाँदा कसैको नाम नै गुरु भयो भने त केही लाग्दैन गुरु वा भगवान भन्ने शब्दको हाम्रो समाजमा दुरुपयोग भयो कि भन्ने मलाई लागेको छ । बिराटनगर नजिक पर्ने भारतको सीमाना जोगवनीमा एकजना भगवान नामक ‘डन’ थिए, पछि उनी प्रहरी ईन्काउन्टरमा मारिए भन्ने मैले सुनेको, पुष्टी भने भएको छैन । उनको नाम भगवान थियो, उनी भगवान थिएनन् । उनलाई भगवान मान्नेलाई त के लाग्छ र ? उनले पनि कसैको उपकार गरेका थिएनन् भन्ने पनि त छैन नि ! सानो उपकार गर्ने, कर्तब्य गर्नेबित्तिकै गुरु वा भगवान मानिहाल्ने होईन नि ।
गुरु वा भगवान यस्तालाई मानौ जसले समग्र समाजको उत्थानकान लागि महत्वपूर्ण काम गरेको होस्, याकिकी परिवार, समुदाय वा सानो घेरालाई मात्र राम्रो गर्नेलाई कसरी गुरु मान्न सकिन् ? गुरु वा भगवान यस्तालाई मानौ जसले विश्वभरको मानव सभ्यतालाई बचाउने, सभ्य बनाउने, विकशीत बनाउने पवित्र काम गरोस् । बाबु आमाले सानामा माया गरे पालन पोषण गर्नुभएको छ भने वहाँहरुलाई कमाउन सकेको खण्डमा नैतिकताको हिसावले त्यसको ब्याजसहित ऋण तिर्ने व्यवस्था गरे भैगयो नि । शिक्षकको कुरा बाँकी रह्यो, शिक्षकले जोकोहीलाई पढाएको छ भने वहाँले राम्रोसँग तलव लिनुभएकोहुन्छ, हेडमास्टर नै हुनुहुन्छ भने त वहाँले त मिल्यो भने स्कुललाई नै टाँट पल्टाएर भ्रष्टाचार गरी बर्बाद समेत गर्नुभएको हुन सक्नुहुन्छ । अझ प्राईभेट स्कुलका फाउण्डर, प्रिन्सिपल वा शिक्षक त सीधै पौसा कमाउन खुलेका डिपार्टमेन्टल स्टोर र होटल भन्दा पनि ठूला ब्यापारी छन् जसले घर खेत बेचाएरै तपाईलाई पढाईरहेका हुन्छन् । उनीहरुलाई पनि तपाई गुरु नै मान्नुहुन्छ भने त मैले के भन्नु ? अस्पतालले बरु बिरामी भएपछिमात्र घरखेत बेचाउछ तर प्राईभेट स्कुल कलेजले जिउदै मरेको तुल्य बनाउछ, बिनापैसा पढ्न पाउने ठाँउमा आफ्नालईमात्र छात्रबृतिमा नाम निकाल्न तम्तयार हुन्छ । लाखौंका बिटा लिएर तपाईको ६५ नम्बर आएको छ भने ९ नम्बर आउनेको अगाडी ६ थपेर ६९ नम्बर दिएर तपाईलाई पछि पार्छ धेरैपछिकोलाई तपाईभन्दा अघि पार्छ, उदाहरण केहीदिन अगाडी त्रिभूवन विश्वविद्यालय किर्तिपुर गोप्य साखाका कर्मचारी सुरेन्द्र कोईरालालगायतको उदाहरण दिईएको हो । वीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपनि प्रा.डा. थिए उनलाई करोडौंको भ्रष्टाचार मुद्धामा अख्तियारले रङ्गेहात पक्राउ परेर थुनेको छ, कि उनैलाई गुरु मान्ने? उनले पनि हजारौं विद्यार्थीलाई पढाए । नमान्नुस्, सानो फाईदा दिनेलाई गुरु, गुरु मान्नुहोस् त यस्तालाई जसले हवाई जहाज बनाएर बिश्वभरका मानिसहरुलाई सजिलै एकठाँउबाट अर्कोठाँउमा जान सहज बनाईदिए । भगवान मान्नुहोस त यसलाई जसले समाज, पृथ्वी वा मानवको हीतको लागि काम गरेको होस् । जुनसुकै राजनीतिक दलको होस, जुनसुकै जातको होस्, जुनसुकै देशको होस्, जुनसुकै भाषा बोलोस्, जुनसुकै धर्म मानोस्, कालो होस वा गोरो, होचो होस वा अग्लो, त्यसको समाजको लागि सकारात्मक काम गरेको होस त्यसलाई गुरु मानौं ।
माथी उल्लेखित संस्कृत स्लोक अनुसार उनीहरुलाई मानौ जसले ७ अर्ब मानिसहरु, अझ पशुहरु र श्रृष्टीका लागि नै काम गरौं । बाँकी रह्यो बाबुआमालाई नमान्ने, जन्मदिने बाबुआमालाई छाराछारीले आफूहरुलाई सबैभन्दा बढी माया गर्ने मान्छेको रुपमा मान्न सकिन्छ । बाबुआमाबाट आशिर्बाद लिन सकिन्छ । गुरु र भगवान मान्न भने सकिन्न । शिक्षकलाई कसरी हेर्ने ? उनीहरुलाई शुभचिन्तकको रुपमा हेर्दा हुन्छ, अन्य १० थरी गुणहरुले शिक्षकलाई सम्मान गर्न जरुरी छैन । बाँकी रह्यो पण्डीतजीको कुरा उनले पनि दक्षीणा रामैसँग हात पारेका हुन्छन्, पछिल्लो समयमा त राम्रो दक्षीणा नदिनेकोमा पण्डीतजी जाँदैनन् भन्ने कुरा सुन्नमा आउँछ, पण्डीतजी प्रायः ब्राम्हण समुदायका मानिस हुन्छन्, उनीहरु आफू भन्दा तलका जातले छोएको खान्नन्, गुरु मान्ने मान्छेले जात भनेर कसैला हेला गर्छ भने त्यस्तालाई कसरी भगवान वा गुरु मान्ने, गम्भीर प्रश्न छ । गुरु वा भगवान जोपायो उहीलाई मानेर शब्दको दुरुपयोग नगरौं भन्ने मेरो ब्यक्तीगत र अहिलेसम्मको मान्यता हो ।
३१ असार २०७६, मंगलवार १५:१०